1. မွှေးသောအရသာရှိသောအရသာနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည် သူတို့ကလူတိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်မည့် spaghetti, salad, or hearty breakfast မနက်ခင်းနံနက်ခင်းကဲ့သို့သောစားပွဲခုံတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ဘယ်သူကအိမ်မှာပါတီပွဲလုပ်မလဲ ဒီနေ့အိမ်သုံးအိမ်၊ အိမ်ရှစ်အိမ်အတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အရသာရှိတဲ့မွှေးကိုထည့်ဖို့မီးဖိုကိုသုံးပြီးဘေကွန်ပြုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိတယ်။ အေးမြသောရာသီဥတုကိုခံစားနိုင်ရန်ပရိုတိန်းနှင့်အဆီကြွယ်ဝသောမီနူးတစ်ခုဖြင့်အစားအစာသို့မဟုတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအဓိကသင်တန်းနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ရိုးရိုးမီးဖိုကိုသုံးပါ။
2. ဘေကွန်ဆိုတာဘာလဲလူအများစုမသိရသေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေကွန်သည်ဝက်သားဝမ်းထဲကလုပ်ထားလို့ပဲ သို့သော်ဆားခတ်ပြီးနောက်အချိန်ကာလတစ်ခုထွက်ခွာပြီးနောက်၎င်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကြာကြာအစာမစားရန်အစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ထပ်ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်ခြင်း ရေ၊ ဆား၊ သကြား၊ ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်နှင့်ဆိုဒီကွတ်အက်စစ်သာသာမွှေးကြိုင်သောအသားထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပြီး၎င်းကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်ထားခဲ့ပါ ဘေကွန်ဖုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများ•အရည်အသွေးမြင့်ဘေကွန်•အပူခံနိုင်ရည်ဖုတ်ထားသောဘေကွန်ပြားပြား•မီးဖို
3. ဘေကွန်ချပ်များကိုပန်းကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်ပေါ်တွင်ထားပါ။ အသားခေါက်သို့မဟုတ်အခြားအပိုင်းအစနှင့်အတူ overlaid နိုင်အောင်ဘေကွန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် ပန်းကန်တစ်လျှောက်လုံးအပူရရန် ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအလူမီနီယံသတ္တုပါး၏ထိပ်တွင်နေရာချနိုင်သည်။ လွယ်ကူသန့်ရှင်းရေးအတွက်
4. •ပြင်ဆင်ထားသောဘေကွန်ပြားကိုမီးဖို၌ထားပါ။ ထို့နောက် 205 at အပူချိန်ထားပါ။ •ဘေကွန်ကိုပထမဘက်တွင် ၁၂-၁၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။ ထိုအခါတူညီသောကာလများအတွက်မီးဖို၌ထား၏
5. သပ်သပ်ရပ်ရပ်လှပသော, ပန်းကန်စီစဉ်ရန်ထွက်ယူပါ
6. မီးဖို၌ဘေကွန်ကိုအပြည့်အဝနှင့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သောအရသာရှိသောမီနူးသည်ငန်ငန်ငန်ငန်သောငန်သောအရသာနှင့်သစ်သား၏အနံ့ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သောအစားအစာအဖြစ်စားနိုင်သည်။ ဒါဟာအလေးအနက်ထား appetizer ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ပေါင်မုန့်၊ ဒိန်ခဲနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို Vanwich Bacon လို့ခေါ်တယ်၊ သူတို့ကလေးတွေဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ်တွင်ထည့်ပြီးဒိန်ခဲကိုထည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်နှလုံးသားအတွက်အရသာရှိသောကဲသာဆန်အသုပ်ဖြစ်သည်။ spaghetti carbonala ဖြန်း လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာများကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စေသည်။ သို့သော်ဘေကွန်သည်အဆီပိုသောအစားအစာဖြစ်သည်။ တော်သင့်ရုံစားခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်အလွန်အကျွံအစာစားခြင်း ကျိန်းသေအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ် အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေလုပ်ကြရအောင် ပုံစံ၏နှစ်တွင်ရိုးရှင်းသောမီးဖိုဖုတ်ထားသောဘေကွန်နည်းဖြင့်အနံ့ရနံ့သည်ပျံ့နှံ့ကာနွေးထွေးမှုနှင့်အားလပ်ရက်အမှတ်တရများကိုတိုးပွားစေသည်။